ZONKE ULWAZI kususelwa WEZABASEBENZI
zeplastiki naguqulwe kancincane kwi "bathathu" utshintsho
Le izimbiwa ezingaphiliyo ezifana powder calcium carbonate yongezwe resin isiseko, wadlala imisebenzi ezinkulu ukunyuka ezintathu, ukuphucula indlela umfundi aqhuba nokwanda ukusebenza, ebizwa ukugcwaliswa yeplastiki. Kwimeko yokusebenza ukuhlangabezana, esebenzisa umgubo ngakumbi, kwaye indima enkulu ekunciphiseni iindleko. Ukunciphisa inani leoli-based okubonakalayo yentlaka eyenziweyo ezisetyenziswayo, iminikelo nangakumbi eluntwini. Njengoko uqoqosho China uye wangena i "omtsha oluqhelekileyo" nokutshintsha imo ukukhula kwezoqoqosho, bazenze entsha yeplastiki ilungiswe. Ngokubanzi, ukukhanya, esebenza kunye eco le ulwalathiso elizayo shishino.
Ngenxa yokuba ezingaphiliyo izimbiwa umgubo loxinano ngaphezu lexinene i nentlaka Polymer (2-3), ezele ngeplastiki izinto loxinano kwandisa kakhulu ngenxa ngumgubo ongezwe. ubunzima Unit umbandela, intlaka kunye nomgubo esulungekileyo ratio lincinane ngobukhulu, inombolo, ubude, indawo, apho ixabiso ibalwa, kunye nelahleko ngenxa yokuhla ezi zinto kaninzi ngaphezu iingenelo ngokusebenzisa i fillers ngumgubo cheap. Ukongeza, ukutyeba sandise yeendleko zothutho, abasebenzi kunye neminye imiba. Noko ke, uphononongo lufumanise, ngokusebenzisa izinto ekrwada kunye nobuchwepheshe kunye nezixhobo kwezinto ezintsha, "ingxaki ubunzima" ingasombululwa ukusa kwinqanaba elithile.
Polypropylene (PP) iflethi, phantse izihlandlo amaxesha amathandathu uqine, amasuntswana umgubo calcium carbonate iphaphatheke molekyuli PP esekwe umgama omde imingxunya ukuze ubunzima efanayo eziphathekayo, ubude bayo wire flat ayizange iguquke kakhulu, ngoko iimveliso eqine omkhulu ngokohlobo iingxaki ubunzima boni.
Bovuthela udini yeplastiki umboniso ngexesha processing ngu ukuzolula kumacala amabini, umlinganiselo ukuzolula kuye ngo izinto ezahlukeneyo, kodwa ngokuqhelekileyo amaxesha amabini okanye amathathu. Kwaye ufake imali efanayo isitofu oluxonxiweyo izinto zeplastiki lomgubo, ukuxinana evuthelwe nesigcawu mncinci kakhulu.
iziphumo zovavanyo yabonisa ukuba, ukuba isitofu ambumbe, ukuba uyakwazi ukufunda uxinzelelo inaliti kunye nokunyanzela ixesha noxinzelelo, imixube ngokulinganayo kunye nezixhobo processing, utshintsho ingxinano eziphathekayo ukuya ku-3 ~ 4% iimveliso zayo ziphene sukube.
additive Plastic rally eguqulweyo market
kwezithako zeplastiki iimveliso zeplastiki akhawunti ukuba inani elingaphantsi kwe-8%, kodwa yayo phezu iimpawu iiplastiki processing kunye neemveliso ukuphucula nokwandisa indima zidlala indima ebalulekileyo. Xa isakhiwo nentlaka Polymer, ukukhethwa nokusetyenziswa nezongezelelo kukuqinisekisa ukuphumelela okanye ukusilela iqhosha lemveliso leyo.
Njengoko kukho inkxaso ebalulekileyo iiplastiki yokwenza ushishino, iiplastiki ongeziweyo kunye namanqanaba eliphezulu, inqanaba nomgangatho wemveliso, ixabiso, kuchaphazela ngqo kwaye amisele iintlobo inqubo yokubumba kunye nezixhobo ukuvelisa iimveliso zeplastiki ezisemgangathweni kunye nexabiso. Kunokuthiwa ukuba iiplastiki yokwenza ushishino kunye zeplastiki iimveliso ukuba ekuphakamiseni imilinganiselo kwezithako zeplastiki ukunyusela kusengaphambili!
Kwiminyaka yakutshanje, ishishini abangabancedani wenze inkqubela enkulu kunye impumelelo. imveliso Plasticizer isikali, nobuchwepheshe, kunye neemveliso iintlobo ezisemgangathweni iimveliso kunye nezinga nokwanela basekhaya rhoqo ngcono; calcium class zinc eshushu arhente ezinzileyo womthamo, emaXhoseni kunye umthamo isicelo kabukhali ukukhula, elikhokelayo ityuwa ozinzileyo arhente inani yancitshiswa ngakumbi; akukho halogen, kwaye nomsi nokwandiswa arhente eliphantsi uhlobo flame nekudodobalisa kunye lesilicon nelangatye arhente nekudodobalisa kweziphilayo imveliso nophuhliso wenza ukusebenza; isakhiwo esitsha ezinto eziphilayo, kunye nohlobo abazahluleleyo antioxidant, kwaye ukukhanya iintlobo arhente ezinzileyo rhoqo zaveliswa. Ukongeza, iiarhente imichiza yewayini, osekhohlo ifuthe zokuthambisa, arhente nokuhlangana, arhente antistatic, iiarhente nucleating kunye nezinye iimveliso abangabancedani sele iphumelele iziphumo ezikhuthazayo.
Ukususela 2015 ngendlela kwiintengiso mboni kancinane phantsi, kodwa iitoni umda ngeniso kuye kwaphucuka, abanye bade zivela imeko rally le. Kwimeko kushishino iiplastiki xa lulonke ayikho nethemba, uphuhliso lwemveliso ilungile ngaphezu kwezinye iintlobo. Ezi ukuhambela phambili iiplastiki ongeziweyo malunga umgangatho iimveliso kunye nemveliso, ngokufanelekileyo nizityhala nokukhuthaza iiplastiki ezisetyenzisiweyo kunye nemveliso nokuqhutywa nophuhliso kunye nenkqubela.
ukudibana ngqo kunye nezinto imithi ezingxobeni iinketho container
Ngenxa izinto, kunye zeekhonteyina zesakhiwo, kunye iziyobisi impahla yi khetha lwezincedisi yoqobo kunye nenkqubo yemveliso ezahlukeneyo, impahla iziyobisi kunye isikhongozeli kwi ezinye iikopi iqela uya kwaba zoqhagamshelwano iziyobisi lichithakale ngaphandle, yaye okanye kunye neziyobisi yenzekile ngalinye enye indima, yaye okanye iziyobisi ixesha elide efunxa ngokudleka off iipilisi ze ukusebenza ngqo neziyobisi yomgangatho; kwaye, abanye umgangatho kweziyobisi kunye yabantu nguqu ithe efihliweyo ngesondo (ukuba kubulunga kweziyobisi kunye yabantu uvavanyo Jikelele na efike ungakwazi ngxaki).
imigaqo Ezikhethiweyo kunye neemfuno
1, ukupakisha ukusebenza
mveliso Pharmaceutical imveliso, ekugcinweni, ekuthuthweni, ukusetyenziswa kweziyobisi, ngelo xesha kweziyobisi, udlala ukukhuselwa umgangatho iziyobisi, umsebenzi ukhathalelo lwempilo lula.
2, umgaqo ukukhetha
Kufuneka zisekelwe phezu iimpawu kwemfuno kweziyobisi kunye neepakethe neziyobisi izinto, iinkqubo ekucaciseni kunye nemveliso, khetha ukukhanya, ubushushu, ingqele, imitha uvikele iipropati isithintelo kakhulu, ioksijini, umphunga wamanzi, kunye nezinye izinto, ukuzinza kwabo, nezinto nokupakishwa neziyobisi kunye izikhongozeli okanye ukudluliselwa omnye komnye.
ZaMalahle ukuya olefin byi ebandayo kodwa hot apho
2015, China ishishini amalahle olefin wongezelela umthamo release isantya ngokuqinisekileyo behlisa, isicwangciso kulo nyaka kufuneka abe sele imveliso isixhobo ngaphezu kwezigidi ezi-3 etoni, kodwa, njengokuba Oktobha ekupheleni ze sisasazeke idivayisi entsha kuphela Tung Wah Group of energy iteksti River petrochemical kunye Pucheng icocekile amandla, yaye ngokutsho umyalezo enokuthenjwa wathi, kulindeleke ukuba kulo nyaka kwisiqingatha sesibini yemveliso neetoni 350,000 ka / iminyaka kwi Inner Mongolia Thai isixhobo elide PP eneji ziya elinye ixesha ku-2016, kwaye kulindeleke ukuba Novemba ekupheleni drive in the cast wamalahle enkulu, kulo nyaka uyakwazi ukuqhuba okwangoku belingekawakhuphi ukucacisa umyalezo. Ngelo xesha, Changzhou Fude, Guangzhou petrochemical kunye Qinghai Salt Lake kwakhona inolibaziso ixesha ezahlukeneyo. ZaMalahle ukuya olefin ayikho ayekelele kade, indlela?
Ndisitsho nje inyaniso, kwilizwe ndayame-oyile abantu 1.3 billion iye ngaphezu kwe-10 izixhobo amalahle gasification ayikho kangako, kodwa wakhankanya, abatyali-mali abaninzi yasenza ngenxa amathemba zoqoqosho amalahle gasification. Ngoko inzuzo layo linyuke kunye nemveliso nganxanye ityala. Kuba phantse unyaka, amaxabiso e-oli kumazwe ngamazwe kuwa ukusuka phezulu, yayidodobala apho ezinokubakho, ukothuka ixesha elide ophantsi eneneni amafutha ukuba olefins iimbalasane lubalaseleyo kuphela nobugcisa abadala ngakumbi, yaye iindleko ayibizi kakhulu. ZaMalahle ukuya inzuzo ingeniso olefin ngcembe yaphela ngaxeshanye, njengoko ixabiso lemarike PP, PE iyaqhubeka abawayo, iimveliso oyile kunye neemveliso kwamalahle isasazeka kwiintsuku kutshanje ukuvala, ishishini iikhemikhali amalahle amaxabiso aphantsi inzuzo ayisekho. Ku PP, umzekelo, ngoku amalahle kumashishini olefins ukusuka amalahle ukuya ezinepolypropylene ekrwada iindleko eziphathekayo, iindleko zemali kunye neendleko zolawulo udibaniso malunga 7000 Yuan / ngetoni nganye, kunye PP umahluko kwexabiso lemarike, ezinye iinkampani bade imali elahlekileyo, ingeniso , yaye kwimeko, uphuhliso lwexesha elizayo kwamalahle olefins linokuchazwa ngokuthi angaqondakali.
Kakade ke, ukongeza ixabiso eliphantsi zeoli le luthintelo amalahle ekhaya ukuya kwimveliso kukwehla olefin le projekthi imiba ephambili, ubugcisa, imali, uvavanyo lwefuthe kokusingqongileyo kunye uthotho lwemibuzo, kunye nenjongo eziqhelekileyo lokuqhuba kule leyini kade. Kwangaphambili ukuba amaxabiso e-oli kumazwe ngamazwe kuhlala kwi-50 eerandi umphanda, zifanele ukuba ukuphinda-ukuhlola ithemba amalahle ukuze olefins kulindeleke.
Amaxabiso PP kuqhubeka eshukumisa phantsi iziko womxhuzulane "zingawi" nini?
PP izinto ezimbi eziphambili kurhwebo kwixesha elizayo;
1 zokumisa kongezelelwa, ukuqhuba izityalo petrochemical omtsha akukenzeki inqabile; akukho lutshintsho okubonakalayo supply emarikeni.
2, imfuno yokugqibela emva ukudinwa, uninzi mveliso abafumana unqumamo, qhubeka kwi-imfuno ukuthengwa ukugcina imveliso eqhelekileyo.
3 kulawula okubi, umniki-nkonzo, inkoliso yokukhula ngeniso-yokwabelana deal, ukugcina uluhlu libya yayo.
4, "imiphanda ezimbini" isitokhwe petrochemical abawayo, ex-imisebenzi ngewuthe shwaka, amaxabiso aphantsi kuqhubeka ukubetha imarike.
5, PP elifutshane yembutho-lubalaseleyo bazisebenzise, ​​ngemihla ezisisiseko kunye indawo ephantsi, inhibition na indawo yorhwebo ihlombe, imakethi rhoqo phantsi koxinzelelo.
6, Amaxabiso-oli ababuthathaka, nangona amahla ndinyuka ngexesha, kodwa wasilela uqhubeke, kodwa kuchaphazela imarike ye PP.
Dawn polyethylene market cwaka ithuba elide kakhulu?
eyona miba ephambili echaphazela imarike eBhayi bevela emarikeni, zezi: ebalulekileyo market emantla ukuveliswa nemfuneko, imigaqo-nkqubo amaxabiso amashishini petrochemical kunye nohlobo yomgama ikamva.
Iimarike emantla: amaxabiso e-oli kumazwe ngamazwe ukususela phezulu kunyaka ophelileyo $ 110 okuqala lehle. Okwangoku, i-United States New York oli ekrwada amaxabiso amakamva ukuba abhabhe ngeenxa $ 40, Brent oli ekrwada amaxabiso amakamva ukuba abhabhe ngeenxa $ 44 Supply unciphiso, imfuno buthathaka, inventri aphezulu oli ekrwada uya kuqhubeka ukunqanda ixabiso, imini inventri phezulu kwasuswa, kwamaxabiso eoli nkobe ithambile. IVinyl Asian, ngenxa Ukubonelela okuvelayo kunye nemfuno ephantsi, ukuxhasa amaxabiso ethylene e mpumalanga Asia, Noko ke, xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, ukwanda kusenjalo enkulu.
Imithetho yonikezelo kunye nemfuno: njengoko ayizinzanga, yokupaka elifutshane elide kunye nokulungiswa yengozi kakhulu ngoNovemba, kodwa walahlekelwa imveliso ngenxa yokupaka kunye nokulungiswa kuphela ikhulu lamawaka iitoni izityalo amalahle lwekhemikhali, ngoko uxinzelelo lonikezelo lwemalike ayinakuthelekiswa nanto . impembelelo market elandelayo iprojekthi amalahle gasification, Shenhua Yu Lin neetoni 300,000 kobuchule yokulibazisa de kube sekupheleni sokuqaliswa kaDisemba, wazigquma iitoni 300,000 zezityalo kwamalahle Matshi kunyaka olandelayo kulindeleke ukuba ufake. Ukuveliswa projekthi gasification amalahle, nangona kunzima ukuyibetha ixesha elifutshane kwi PetroChina kunye Sinopec kwi inkokheli iiplastiki emarikeni, kodwa ziza buthathaka shishino evela iingeniso bodwa, imarike lijongene nemingeni. Imfuno, ngokwemeko kuqoqosho oludodobalayo, imboni iiplastiki ayinakuba umnyinyiva. Orders, yaye izinto kulo nyaka kunakwiminyaka engaphambili, yeplastiki iveza amashishini amakhulu kunye naphakathi ukusebenza ngowama-70%, amashishini ezolimo asebenza kwi-60% -80%, mveliso stock izizathu amahlwempu, inani eliqingqiweyo yokuthenga njengoko lilonke, kunzima ngokuthi lixhase olu rhwebo stock. Okanye imeko kweemfuno iyaqhubeka kuxabela Outlook emarikeni.
icandelo Petrochemical: phantsi kwempembelelo oli ekrwada / bazisebenzise ezi phantsi, la manqaku wengingqi ixabiso basinqumla petrochemical, neoli, ukhukuliseko inkxaso kwi ezivenkileni ngexesha elinye, oko kubonisa ukuba kusekho ezinye uxinzelelo wokulindela market stock anda, okubangela emarikeni elidangeleyo jikelele nzima. Isiphelo sale nyanga, amaxabiso e-oli ayeke babulewe kwi kwimarike ndawo kunye nenkxaso eyomeleleyo HIV, kodwa nkobe oluzinzileyo kunzima ukuqikelela kwixabiso elizayo le-oli ekrwada kunye Futures eziqhubekayo ziya kuqhubeka inkalo ebalulekileyo malunga namanani petrochemical.
Ngomhla 2016 Uphuhliso kushishino ezinepolypropylene
KuDisemba, malunga 2015, ngexabiso eliphantsi ngamazwe oyile engahluzwanga, abangatshatanga izinto ezimbi ezininzi ezifana nofumaniso kunye nemfuno ukungalingani hit, ezinepolypropylene e China kwaye yonke oludodobalayo kushishino lwee-plastiki, amaxabiso abawayo, yaye elizayo ezele kumbuzo. Nangona kwiminyaka yakutshanje, imveliso kobugcisa ezinepolypropylene ngumnxibelelanisi, ubugcisa uphuhliso ziye zenza inkqubela enkulu, kodwa izinto olukhethekileyo ixabiso eliphezulu longeziwe kusafuneka ukungenisa ubugcisa bathembele amazwe. Okuhamba kunye namaxabiso lweemveliso kuMbindi Mpuma yesizwe, abenze kwiimarike zethu, ukhuphiswano ishishini kakhulu ngakumbi. Ziyinyaniso ukuqala Apho ukwenza uvale esemgangathweni ngenxa yobuciko iphe zasekhaya.
Nangona inani unit ezinepolypropylene, kodwa osakhasayo imveliso, amandla emveliso iyunithi single-inqongophele, okukhokelela imveliso ngababuthuntu, ukusetyenziswa energy ngaphezulu. Ngoko ke, simele sokuphelisa amandla emveliso umva, ukuthintela inkqubo ukufikelela shishini ukuqinisekisa ukuba le projekthi intsha kule isikali kunye nenkqubo bafikelele kwinqanaba eliphezulu ngamazwe, ukuphucula imarike ukhuphiswano namashishini sizabalazela ukuba umgangatho wemveliso kunye nehlabathi-class.
Okwesibini, amandla ophuhliso iteknoloji eTshayina, kufuneka ukuphucula isakhono ezintsha ozimeleyo kwemizi-mveliso yeemveliso uphando kunye nophuhliso entle ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka, ngokubonakalayo tracking ihlabathi kobuchwepheshe ezinepolypropylene kuvala kunye nezicelo ukwenzela ukuphucula umgangatho kobugcisa ekhaya, kuphungulwe umsantsa phakathi iinjongo ngamazwe.
impembelelo copolymer iimveliso ezintathu yangoku iimveliso ezinepolypropylene kunye nezinto pesenti isezantsi, ezifana iimveliso isiphelo ophezulu. Adjustment kwesakhiwo imveliso, ukuqinisa imizamo yayo ukuba ziphuhlise imveliso entsha likufuphi. Iiprojekthi ezintsha elizayo kufuneka ingqalelo umgangatho ophezulu, iimveliso-value added eliphezulu.
I ezine, Unxibelelwano intengiso, ngamajelo zemarike, bhetyebhetye ukulungisa imveliso ukuhlangabezana nemfuno emarikeni, nangogwebo lula okufunwa ziimalike kuya kunceda kwakhona iinkampani uphephe iingozi ezingeyomfuneko.
PBT imfuno ntambo kwimarike ezingundoqo-basonta ngenxa
imfuno market Tongxiang
Kwimarike textile mali luphela wabandezeleka xa ubusika, Tongxiang market ke lelinye ibali. Kuyaqondakala ukuba Tongxiang cored oosinga umvundla iinwele vulu kwi emarikeni njengomlilo ebusika, sifuna blowout, usondeze efudumeleyo ukupholisa imarike. Okwangoku, ugalelwe umqhaphu kukujikeleza ezingundoqo-basonta umatshini vulu izincedisi, ukususela izinto ukuya PBT nenayiloni, zithiwe thaca eziphelayo. Ngokutsho manani, lo cotton bale ukuya 35% kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, ukunikezelwa isithuba seentsuku ezingama-15; iindleko engundoqo isixhobo isincedisi wavuka 38%, i-ithuba lokusiwa sidluliselwa iintsuku ezingama-20. imiyalelo Ntambo, kodwa kufuneka ezicwangciselwe. Esinye isandla, imakethi kutshanje kuthenga awunazo izenzekele basonta imeko ukukhanya ezininzi, embi unikezelo omfutshane emarikeni. Le Flash ifayibha elifutshane core-basonta imveliso vulu Flash oosinga umvundla iinwele izinto ekrwada.
Zhangjiagang imveliso factory PBT vulu core-basonta
Ukuze engundoqo package engundoqo kwisiseko semveliso vulu Zhangjiagang town imveliso de ngenxa amatyala, kuqikelelwa imveliso PBT package ezingundoqo izixhobo vulu Conservative uye kufuphi 400 Taiwan, eli nani nangoku xa iyaqhubeka rose, okwangoku imveliso yengingqi kakhulu mveliso engundoqo ucukene yandile encinane processing uhlobo mveliso, imveliso inxalenye mveliso nani liye isiqingatha ngentla, kwi ammonia lun package engundoqo imveliso vulu mveliso isilumkiso enkulu isalamane, iinzuzo inxalenye engcono yempahla ammonia lun engundoqo vulu mveliso ayinayo imveliso, kodwa PBT iphakheji engundoqo vulu market okuqhubekayo, Joyina kwakhona PBT unalo liyanda inani mveliso kwimveliso ntambo core-basonta uboya.
Yintoni PBT ifayibha?
PBT luhlobo Imisonto ipholiyesta entsha, ngokuqhelekileyo zisekelwe PTA esterification ngqo BDO ekuveliseni, uze emva koko afumane yokusabela amafu, uze emva koko zinyibilikile bokusonta imicu PBT. 30% ~ 60% PBT ifayibha zobude, ukuchacha elastic ngaphezu ipholiyesta kunye nenayiloni, spandex e ngaphantsi kwe; Ngaphezu koko, PBT ifayibha abe ngqongqo enkulu nemilo uzinzo, bulkiness, kwaye curl sidima, yaye noboya baziva, ngoko kwezinye iindawo tse kwakhona liqaqambile enkulu.
isakhiwo seplastiki izibonisi umgca imveliso mveliso iimpawu template zeplastiki
1, ukumelana amanzi ezilungileyo wesakhiwo zeplastiki itemplates umgca wemveliso. Nokuba ngaba ukuntywiliselwa ngokupheleleyo emanzini iintsuku ezininzi, okanye deformation ngenxa yokuba ibingenakunyakama. Ongabolanga irusi.
2, kunye nesamente ukungavumelani, wokuqwlasela, ukukhululwa ngokulula emva zokwakha okanye deformation ngenxa adhesion ngesamente.
3, ukusebenza ophezulu, umgangatho zeplastiki umgca wemveliso templates isakhiwo. Kunye nokwakhiwa yokwakha asuka kuyo ogudileyo, ngaphandle ukuguqulwa yesibini.
4, ukugcina inkqubo, ukuphucula impumelelo yokwakha. Xa itemplate adluliselwa ngexesha elinye, Pretreat ezikhoyo itemplates, ukufumana iipateni eludongeni.
PE sheet iplastiki umgca imveliso kumazwe angaphandle iimveliso
iimveliso zethu PE yasekhaya umgca wemveliso sheet iplastiki, amacandelo zombane ziphambili amazwe, iqondo eliphezulu esizisebenzelayo, isantya imveliso, ukusebenza lula, ixabiso ngaphantsi kwe 1/10 lokuvela izixhobo efanayo kwamanye amazwe. Ukuveliswa weenkuni yeplastiki ipleyiti kunye nezixhobo, PVC neenkuni yangumgubo, isityalo iindiza njengoko izinto ekrwada, inkqubo udini extrusion ukusuka umgangatho imveliso ukuhlangabezana neemfuno umgangatho weemveliso ezifanayo amazwe.
Ukuveliswa plate umlilo-ubungqina, ukufuma-ubungqina, umlilo-nekudodobalisa iimpawu, esetyenziswa kakhulu ekwakheni, uhombiso kunye nokugcinwa kwaye nethemba kwimalike ngokubanzi kunye nentengiso elide. Wooden zeplastiki endaweni iinkuni, ukukhusela imithombo ehlathini; iplastiki ngomthi Tshala iindiza, ukuze kucuthwe ungcoliseko lokusingqongileyo; iibhodi ngamaplanga ukuphelisa ungcoliseko emhlophe, ihombe bume.
Iinkqubo: kwimbuphu yesarha (ifayibha) omiswe, yongeza isixa esikhulu ngumgubo zomthi; iinguqu ezingephi, kodwa unako ukuvelisa ibhodi alephuze amagwebu PVC, irayisi bran lingatshintsha zokuba ziinkuni.
PE sheet plastic imveliso umgca nge eyenzelwe ngokukodwa SJSZ92 etsobhileyo Screw amawele extruder, DC drive isantya bume, ubushushu ulawulo isixhobo brand amazwe, kukho isantya uluhlu olubanzi, ngqo ulawulo eliphezulu lobushushu, kulula ukuba ukusebenza kwaye athembekile. Auxiliary lwepolitiki ekubumbeni itafile, umatshini imoto, ukusika umatshini kunye push isakhelo.
Ifakwe isixhobo enkulu Ukupholisa ukuqinisekisa ukuba result sheet metal bokwakha. Track-uhlobo itektala gear ngqo ngeemoto inverter, kunye nesakhiwo esifanelekileyo, ibambelele omkhulu, imoto, uzinzo njalo njalo. Ukucanda umshini ethembakeleyo nezichanekileyo, ukusika eliphezulu ukuchana merit, tyhala nesakhelo kunye netroli push elisusekayo sokuhlanganisa ukutyabeka ezizodwa, akukho buhlungu eziphathekayo, kulula ukuyisebenzisa njalo-njalo. unit Umatshini Auxiliary kunye nenkqubo yolawulo ofakwe lokulawula ikhompyutha okanye brand zasekhaya, umatshini epheleleyo olawula uzinzo oluthembekileyo.
Ucalulo olufutshane kuphuhliso izinto zokubopha kunye nemigangatho
China iiplastiki ukuphakheja noshishino izinto iye yaba lelinye lamashishini esiqhelekileyo, 2011 ekupakisheni output zethu zoshishino zafikelela kwizigidi 130 Yuan, ukwanda nge-20% ngonyaka, 2014 okanye ukufikelela 2 ezigidi yuan, 14 kudidi kumashishini 42 ezinkulu kweli lizwe, liye laba yesibini ngobukhulu United States iphakheji yesibini ngobukhulu ehlabathini. Iinkampani sopakisho Food ezenza malunga nesi-1/3,, iminyaka 2013 kulo lonke amashishini kushishino ukupakisha, iiplastiki China i-nokusingatha namashishini ngaphezu imveliso ubungakanani elijongene kufikelela kwizigidi 61,886 iitoni, kunye nemveliso kumashishini amancinci nasakhulayo abangaphezu kwezigidi ezili 80 tons ngo-2014, lo nokusetyenziswa kwemveliso zokubopha zeplastiki ligqithisile 100 million tons, apho, ngaphezu malunga nezigidi ezingama-20 iitoni nokubopha ukutya zeplastiki, ngoko ukhuseleko yayo unako isihloko shushu.
Ngeplastiki iimveliso eziphathekayo iplastiki kwi, kunye nentlaka zeplastiki iimveliso zeplastiki processing malunga ezahlukahlukeneyo ongeziweyo ntlobo baninzi, ukuze kufikelelwe intlaka okanye iimveliso aa iplastiki ngeempawu, ekwenziweni kusekwe kwi simele ezifunekayo ezongezelelekileyo ze ngokomlinganiselo nokuphuculwa komsebenzi wayo processing okanye iimpawu, yaye ezi nezongezelelo okusingatha sawo lwesakhiwo iimpawu inkqubo usebenzisa kule okanye imveliso kwi ongenako uzinzo, ukuba kwakhokelela igesi eziyingozi eguqukayo kwaye yokufudukela, kubantu yokuphila eletha iye kufuneka izinto ezimbi.
Ngokukodwa, asibi ukulawula ishishini ukuze asukele iingenelo rhoqo. ukusetyenziswa onzima izinto onganeno ekrwada ukuya kwimveliso, okukhokelela ukudideka emarikeni; ezinye mveliso cottage encinane. Wona okubonakalayo isebenzisa izinto ezisemthethweni, kule nkqubo, musa ukuhlangabezana neemfuno ubugcisa bemveliso nokubopha ukutya, imveliso lingenako ukuhlangabezana neemfuno imveliso yokugqibela, izisa emarikeni ephela elahlekisayo.
Ngoko ke ngeenxa yeplastiki impahla ukutya ingayingxaki yokhuseleko iye yacinga baba ngabantu abaninzi unonophelo eshushu, China ngenxa kushishino zeplastiki yaqala emva kwexesha, kunye nophuhliso ngokukhawuleza, imfuno yangaphakathi omkhulu, kwakhokelela kwezinye efihliweyo of ukuba athathe ezifumaneka ngexesha, umgangatho umgangatho a ixesha kunye nesigaba imarike elihambelana, oku ezinye amancinane uhlobo workshop mveliso lasekhohlo umntu ukusinda kwendawo, ngeli lixa ukuya kushishino kuzisa kuye elibi ukusebenza.